जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि आ’त्मह’त्या गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिएका राजपुतले किन गरे यस्तो निर्णय ? बलिउड शोकमा – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि आ’त्मह’त्या गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिएका राजपुतले किन गरे यस्तो निर्णय ? बलिउड शोकमा
एजेन्सी । बलिउड क्षेत्रमा एक पछि अर्को शोकको घटना बढ्दै गएका छन् । बलिउडले एक पछि अर्को होनहार कलाकार गुमाउँदै गएको छ । ऋषीकपुर, इसफान खान, चचीृत संगितकर्मी वाजिद लगायतलाई वलिउडले लकडाउनकै क्रममा गुमायो । आइतवार विश्वासै गर्न नसकिने अर्का एक होनकार कलाकारलाई पनि गुमाएपछि बलिउड शोकमा छ ।
आफ्नो करियरलाई उकालो चढाइरहेका ३३ वर्षका कलाकार तथा अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले देहत्याग गरेका छन्। सफलताको उचाइमा रहेकै बेलामा गरेको उनको यस्तो निर्णयले सबैलाई अचम्म पारेको छ । उनले देहत्याग किन गरे भन्ने कुरा अहिले सम्म खुलेको छैन । भारतीय सञ्चार माध्यमले उनको निधनको कारण अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्
टेलिभिजनबाट आफ्नो करियर सुरु गरेका राजपुतले काई पो चे चलचित्र मार्फत बलिउडमा डेव्यु गरेका थिए। सुद्ध देशी रोमान्स, रब्ताु, पिके, एमएस धोनी’ , केदारनाथु , ‘छिछोरे’ लगायतका चलचित्रमा उनले अभिनय गरेका छन् । उनका चलचित्र बक्स अफिसमा सफल भैरहेका थिए भने क्रिटिक्सले पनि उनको कामलाई तारिफ गरिरहेका थिए ।
उनको अन्तिम रिलिज चलचित्र ुछिछोरेु रहेको थियो । यो चलचित्रले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि देहत्याग गर्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । जसले यस्तो सन्देश दिने फिल्ममा अभिनय गरे उनैले देहत्यागको निर्णय गर्नु अचम्म मानिएको छ । उनी आफ्नै जिवनसंग किन हार माने यसको कारण खोजि भइरहेको अन्तराष्ट्रिय मिडियाले जनाएका छन् ।
यी हुन् कोरोनाभाइरस सं’क्रमितको उपचार गर्दागर्दै ज्यान गुमाएका डाक्टर लिउ झिमिङ
कोरोना भ्याक्सिन बनिसकेको इजरायलका रक्षामन्त्रीको घोषणा, विश्वभरी प्याक गरेर पठाउँन मात्र बाँकी